Album Adiguna ma muujisid on Your iPhone? Mushkiladii loo xaliyo
> Resource > iPhone > farshaxanka ma muujisid on Your iPhone? Halkan yahay xalkaaga aad
"Waa maxay sababta fanka heestii aan muuqata heesaha oo aan iPhone 4? Ma waxaa jira codsi kasta oo kaa caawin doona in ay sameeyaan in? Waxa kaliya u muuqataa cajiib ah oo aan farshaxanka album in haatan ay la ciyaari ah. Sidaas kaliya waxaan doonayaa inaan ogaado dhibaatada soo baxay. Rajaynaynaa in qof i siin doonaa talaabooyinka in ay raacaan, waayo, taasu qamaar? Thanks. "
Miyaanay su'aalo isku mid ah iyo dhibaatooyin sida kor ku xusan? Halkan waxaad ka heli kartaa jawaabaha iyo xal. Sababta sababta arts heestii ma muujinaya ilaa aad iPhone waxaa laga yaabaa sababta oo ah fanka heestii aan gundhig in heesaha. The Wondershare TidyMyMusic u Mac ( TidyMyMusic Wondershare ) waa waxa aad u baahan tahay halkaan si buuxda u hagaajin aad waayo-aragnimo music. Waxaa si toos ah u aragto farshaxanka oo dhan oo aad songs maktabadda Lugood ka dibna aad Cudarada karaa farshaxanka ah in kasta oo song, kaas oo awood u farshaxanka ilaa ay muujiyaan meel kasta, oo ay ku jiraan aad iPhone. Ma sugi karo in aad iska baarto? Aan aragno tutorial faahfaahsan hoos ku qoran.
1 barnaamijka dejinta maktabadda oo dhan Lugood
Download barnaamijkan in ay marka hore soo dajiyo aad Mac. Marka aad furto barnaamijka dib markii la rakibey, waxaa si toos ah iskaan doonaa maktabadda Lugood aad ka dibna ku dar oo dhan music si ay saxaarad faylka hoos nidaamsan Lugood .
2 Raadi arts gabaygii kasta oo Lugood
Raadi badhan Scan in madax barnaamijka. Dooranaysaa checkbox ee Search for Songs Allaha oo guji ah Scan button. Sidaas, barnaamijkan bilaabi doonaan in ay ka heli arts oo dhan gabayadii maktabadda Lugood aad.
Fiiro gaar ah: Haddii aad sax ku checkbox ee Search for labalaabka Songs, barnaamijka ayaa sidoo kale kaa caawin karaan inaad hesho tus in meesha laga saaro si ay qashinka iyo meel drive adag oo lacag la'aan ah ilaa.
3 arts Embed in song kasta
Riix hees iyo arko ay farshaxanimada khaanadda xaqa ka furmo suuqa hoose. Waxa kale oo aad eegi kartaa macluumaad kale oo ka dibna riix ka codso button in Cudarada dhammaan macluumaadka ay u files music ah.
Fiiro gaar ah: Waxaad edit karaa farshaxanka haddii aad jeceshahay. Guji Edit icon khaanadda saxda ah ka dibna jiidi image maxali ah si ay u meel tahay album in ay bedelaan farshaxanka ah.
4 songs nidaameed si iPhone la arts kor u muujinaya
Waxaad u hagaagsan kartaa heeso si aad iPhone ka dib markii arts waxaa gundhig in files music ah. Kombuyuutarka, u furan Lugood iyo heeso u hagaagsan ka Lugood lifaaq aad iPhone.
Hadda waxa sameeyay. Fudud, miyaanay ahayn? Waa in aad u siiyo go a oo aan marnaba la sii dayn doonaa.